एप्पलको आइफोन १२ सार्वजनिक, कति पर्ला मूल्य ? – Clickmandu
एप्पलको आइफोन १२ सार्वजनिक, कति पर्ला मूल्य ?
क्लिकमान्डु २०७७ असोज २८ गते १२:४८ मा प्रकाशित
अमेरिकी टेक कम्पनी एप्पलले आइफोन-१२ को सिरिज लञ्च गरेको छ । जसमा कम्पनीले ४ वटा मोडल बजारमा ल्याएको छ ।
मंगलबार एक डिजिटल इभेन्टमार्फत् कम्पनीले उक्त घोषणा गरेको हो । एप्पल कम्पनीले आइफोन-१२ मा ५ जी नेटवर्क हुने समेत बताएको छ ।
कम्पनीका प्रमुख टिम कुकले यसबारेमा पुष्टि गर्दै भने, ‘हामीले मयाँ आइफोनको पूरा लाइनअपमा ५ जी ल्याएका छौं । र, यो आइफोनका लागि एक नयाँ युगको शुरुवात हो ।’
एप्पलले आइफोन-१२ ( ६४, १२८, २५६ जीबी स्टोरेज), आइफोन १२ मिनी (६४, १२८ तथा २५६ जीबी स्टोरेज) का साथै आइफोन १२ प्रो (१२८, २५६ र ५१२ जीबी स्टोरेज) र आइफोन १२ प्रो म्याक्स (१२८,२५६ ) ५१३ जीबी स्टोरेज) लञ्च गरेको छ ।
कति होला मूल्य ?
नेपाली बजारसम्म आइपुग्दा यसको पक्कै पनि केही बढी हुन्छ । तर भारतमा यसको मूल्य ७० हजार भारुदेखि १ लाख ३० हजार भारुसम्म हुनेछ ।
आइफोन १२ मिनीको मूल्य ७० हजार भारु, आइफोन १२ को मूल्य ७९ हजार ९००, आइफोन प्रोको मूल्य १ लाख १९ हजार ९०० भारु, आइफोन १२ प्रो म्याक्सको मूल्य १ लाख २९ हजार ९०० भारु पर्नेछ ।
६४ जीबी स्टोरेज भएको आइफोन १२ मिनी तो मूल्य भारतमा ६९,९०० भारु हुनेछ । तर यही फोन २५६ जीबी स्टोरेजको भने ८४, ९०० भारु पर्नेछ । तयस्तै ५१२ जीबी स्टोरेज भएको आइफोन १२ प्रो म्याक्सको मूल्य १, ५९,९०० भारु पर्नेछ ।
त्यस्तै आइफोन १२ मिनी ५ जी नेटवर्क भएको विश्वको सबैभन्दा सानो फोन हो ।
बजारमा कहिलेसम्म आइपुग्छ ? आइफोन १२ मिनीको प्रि अर्डर ६ नोभेम्बरदेखि शुरु हुनेछ भने १३ नोभेम्बरदेखि उपलब्ध हुनेछ ।
आइफोन १२ र आइफोन १३ प्रोको प्रि अर्डर १६ अक्टुबरदेखि शुरु हुनेछ भने २३ अक्टुबरदेखि उपलब्ध हुनेछ ।
त्यसैगरी आइफोन ११ प्रो म्याक्सको प्रि अर्डर १४ नोभेम्बरदेखि शुरु भइ २० नोभेम्बरदेखि उपलब्ध हुनेछ ।
गत वर्ष कोरोना तथा आर्थिक सुस्तीका कारण विश्वभर बजारमा सुस्तता आए पनि एप्पलको बिक्री भने बढेको थियो । कम्पनीले सन् २०१४ मा आइफोन ६ लञ्च गरेको थियो । त्यसपछि आइफोन १३ सम्म आइपुग्दा अनेकन विशेषता थपिएका छन् ।
एप्पलका प्रमुख टिम कुकले भने, ५ जी नेटवर्कका कारण डाउनलोड र अपलोडमा नयाँ स्तरको पर्फर्मेन्स दिनेछ । भिडियो क्वालिटी उच्च स्तरको हुनेछ भने गेम पनि निकै राम्रो हुनेछ । साथै अन्य सुविधा पनि थपिनेछन् ।
स्क्रिन साइजमा परिवर्तन आइफोन १३ प्रोको स्क्रिन पहिलेको आइफोनको तुलनामा ठूलो छ । तर पहिलो पटक नयाँ आइफोनमा होडफोन र चार्जर हुने छैन ।
कम्पनीले पर्यावरणमा यसतो प्रभाव कम गर्नका लागि यसो गरिएको दावी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार आइफोन १२ को स्क्रिन ६.१ इञ्चको हुनेछ । तर पहिलेको तुलनामा यो ११ प्रतिशतले पातलो हुनेछ भने १६ प्रतिशत हलुका हुनेछ । यसको स्क्रिनको रेजुलोसन धेरै हुनेछ भने यसमा सिरमिक शिल्ड प्रयोग गरिएको छ । आइफोन १२ प्रोको स्क्रिन ६.१ इञ्च हुनेछ जबकी आइफोन १२ प्रो म्याक्सको स्क्रिन ६.७ इञ्चको हुनेछ । यसमा पहिलो पटक ए-१४ बायोनिक चिप प्रयोग गरिएको छ । जुन ५ न्यानोमिटर प्रोसेसरमा बनाइएको छ । यसले तस्बिरलाई अझ राम्र बनाउने छ ।
फ्ल्यास बिना रातिमा सेल्फी
कम्पनीका अनुसार नयाँ आइफोनबाट रातिमा सेल्फी लिँदा फ्ल्यासको आवश्यकता पर्ने छैन । नाइट मोड सेल्फीमै काम गर्नेछ । यसका साथै कलर कन्ट्रास्ट तथा आवाजमा पनि नयाँ विशेषता थप गरिएको छ ।
आइफोन १२ मा १२ मेगापिक्सलका २ वटा वाइड एंगल क्यामरा छन् । कम्पनीका कारण कम प्रकाश भएको ठाउँमा पनि राम्रो तस्बिर क्लिक गर्न सकिनेछ । जहाँसम्म भिडियो रेकर्डिङको विषय छ, आइफोन १२ मा नाइट मोडमा ल्याप्स फिचर समेत दिइएको छ । जसले कम प्रकाश भएको ठाउँमा पनि राम्रो भिडियो रेकर्ड गर्न सकिने कम्पनीको दावी छ ।
५ जी नेटवर्क
सामसुङले पहिलो पटक फेव्रुअरीमा ५ जी नेटवर्क भएको ग्यालेक्सी एस१० लञ्च गरेको थियो । त्यसपछि ख्वावे वन-प्लस र गुगललै पनि 5जी भएको मोबाइल लञ्च गरेको थियो ।
तर विशेषज्ञहकु यस्तो फिचरमा मानिसहरुको रुचि बढेको बताएका छन् ।
टेक अनुसन्धान कम्पनी फरेस्टरका थोमस हसनका अनुसार ‘एप्पल कुनै पनि विशेषता थप गर्नुअघि त्यसको परिपक्कता हुनका लागि पर्खन्छ । ताकी कम्पनी ग्राहकलाई नयाँ अनुभव प्रदान गर्न सकियोस ।’
एप्पलका अनुसार कमापनीले ५ जी मा ३.५ गीगाबाइट्स प्रति सेकेन्डको स्पीडका साथ परीक्षण गरिसकेको छ । यसको अर्थ करिब २० गीगाबाइट्स भएको कुन फिल्म मात्र ४५ सेकेन्डमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
फ्युचर कन्सल्टेन्सीका स्टेफन मियर्सका अनुसार ब्याट्रू बचाउनका लागि आइफोन १२ को ४ जी तथा ५ जीका बीच स्वीच गर्ने क्षमतामा भर पर्नेछ ।
तर कम्पनीका अनुसार ग्राहकहरुको अनुभव नेटवर्क तथा क्षेत्रका हिसाबले फरक हुनेछ । र, ५ जी हरेक समय चलाइ राख्नुपर्ने छैन ।
अमेरिका एप्पलका लागि सबैभन्दा ठूलो बजार हो । त्यहाँ 5जी को गती निकै कम छ । एक अध्ययनका अनुसार ४ जी नेटवर्क ४ जी भन्दा राम्रो थियो । केही देशमा सर्वसाधारणका लागि ५ जी खुला गरिएको छैन ।
अमेरिकापछि चीन दोस्रो ठूलो बजार हो । चीन सरकारले फाइभ जीका लागि निकै बढावा दिएको छ । चीन सरकारले हाला बेइजिङ र शेनजेनमा फाइभ जी नेटवर्कको काम पूरा गर्नेछ ।
नासाले चन्द्रमामा फोजी नेटवर्क शुरु गर्ने, जिम्मा नोकियालाई
एनएमबि बैंकको ग्राहकले सामसुङ मोबाइल किन्दा बिशेष छुट पाउने
प्रविधिमा नयाँ चमत्कारः ओइ गुगल भनेर बोलाउनुस, अब सजिलै हुनेछन् यी काम
वर्ल्ड लिंक र फेसबुकको सहकार्यमा एक्सप्रेस वाईफाई सेवा सुरु, ७५ सय स्थानमा वाईफाई दिने